Wɔkɔɔ adaka no mu (1-10)
Nsuyiri baa wiase nyinaa (11-24)
7 Ɛno akyi no, Yehowa ka kyerɛɛ Noa sɛ: “Wo ne wo fifo nyinaa nkɔ adaka no mu, efisɛ awo ntoatoaso yi mu no, wo nkutoo na mihu sɛ woyɛ ɔtreneeni wɔ m’anim.+ 2 Mmoa a wɔn ho tew no, fa ebiara ason,+ anini ne abere;* na mmoa a wɔn ho ntew no, fa ebiara abien pɛ, onini baako, ɔbere baako; 3 wim ntuboa nso, fa ebiara ason, anini ne abere,* na wɔanya nkwa ma wɔn ase atrɛw wɔ asaase nyinaa so.+ 4 Aka nnanson pɛ na mama osu atɔ+ agu asaase so nnafua 40, awia ne anadwo,+ na mɛpopa nea mayɛ a ɛte ase biara afi asaase so.”+ 5 Ɛnna Noa yɛɛ nea Yehowa aka akyerɛ no nyinaa. 6 Bere a nsuyiri no baa asaase so no, na Noa adi mfe 600.+ 7 Afei Noa ne ne mma ne ne yere ne ne mma no yerenom kɔɔ adaka no mu ansa na osu no refi ase atɔ.+ 8 Na mmoa a wɔn ho tew ne wɔn a wɔn ho ntew ne ntuboa ne biribiara a ɛwea asaase so,+ 9 ebiara abien abien, onini baako, ɔbere baako, kaa Noa ho kɔɔ adaka no mu sɛnea Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa no. 10 Na nnanson akyi no, osu tɔe wɔ asaase so. 11 Noa asetena mu afe a ɛto so 600, bosome a ɛto so abien no da a ɛto so 17 no, subun akɛse no nyinaa ano paapaee na ɔsoro mfɛnsere buebuei.+ 12 Na osu tɔɔ asaase so nnafua 40, awia ne anadwo. 13 Saa da no ara Noa ne ne mma Sem, Ham, Yafet,+ ne ne yere, ne ne mma no yerenom kɔɔ adaka no mu.+ 14 Wɔne wuram mmoa nyinaa, sɛnea wɔn su te; ne afieboa nyinaa, sɛnea wɔn su te; ne mmoa a wɔwea asaase so nyinaa, sɛnea wɔn su te; ne ntuboa nyinaa, nnomaa ne ntakraboa, sɛnea wɔn su te. 15 Wɔkaa Noa ho kɔɔ adaka no mu, aboa biara a nkwa wɔ ne mu na ɔhome,* abien abien. 16 Enti ɔhonam nyinaa kɔɔ mu sɛnea Onyankopɔn kae no, anini ne abere. Ɛno akyi no, Yehowa too ɔpon no mu. 17 Osu no kɔɔ so tɔɔ asaase so nnafua 40, na eyiri pagyaw adaka no fii asaase so ma ɛtɛn nsu no ani. 18 Afei nsu no yiri faa asaase so ma ɛboroo so, nanso na adaka no tɛn nsu no ani. 19 Na nsu no yirii wɔ asaase so ara ma ɛkataa mmepɔw atenten a ɛwɔ wiase nyinaa so.+ 20 Eyiri kɔɔ soro traa mmepɔw atifi basafa 15.* 21 Enti abɔde* a ɛte ase wɔ asaase so nyinaa wuwui+—ntuboa, afieboa, wuram mmoa, ne mmoa nketenkete foforo* ne nnipa nyinaa.+ 22 Biribiara a ɛwɔ asaase kesee so a nkwa wom* na ɛhome fa ne hwenem wui.+ 23 Enti ɔpopaa biribiara a ɛte ase fii asaase so, efi nnipa so kosi mmoa so, mmoa a wɔwea asaase so kosi wim ntuboa so. Ɔpopaa wɔn nyinaa fii asaase so,+ na ɛkaa Noa ne wɔn a wɔka ne ho wɔ adaka no mu nkutoo.+ 24 Nsu no taa asaase so nnafua 150.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “anini ason, abere ason.”
^ Anaa “ɛwɔ honhom a ɛhome.”
^ Basafa a obiara nim no, na ɛyɛ sɛnt. 44.5 (ntk. 17.5). Hwɛ Nkh. B14.
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ mmoa nketenkete a wɔbom sɛ kuw.
^ Anaa “nea ɛwɔ nkwa honhom.”